Yan Aung: September 2009
Being Strong Meant Never Losing Your Self-Control...
I'll never get over you walkin' away....
"All By Myself" would sure hit me hard now that you're gone
Vocalist: Keith Urban
Title: Tonight I Wanna Cry
Album: Be Here...
Posted By Yan 1 Comments
မြန်မာပြက္ခဒိန် ကုဒ်ဒင်းအသစ် ဒီမှာယူပါ...
မိမိတို့မှာ ရှိနေတဲ့ ပြက္ခဒိန် ကုဒ်ဒင်းလေးတွေကို ဒါလေးနဲ့ ပြန်အစားသွင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ. ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေချင်ရင်တော့ ဒီ JS ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ. ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖာသာ အဆင်ပြေမယ့် Hosting site တစ်ခုခုမှာ ကိုယ့်ဖာသာပဲ Hosting လုပ်ပြီး လင့်ခ်လေးကို ထုတ်ယူလိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် အများကြီးက ၀ိုင်းဆွဲလို့ Bandwidth Limit ကျော်သွားတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး.
File Hosting ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ မသိသူများကတော့ ဒီတိုင်းပဲ သုံးချင်လည်းသုံးပါ. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်. လေ့လာချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ အပြည့်အစုံ ဆွေးနွေးရှင်းပြထားပါတယ်...
ဒီကုဒ်ဒင်းလေးကို Develop လုပ်ပေးတဲ့ မာ့ခ် (ခ) ကိုစိုးမင်းကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ကြပါစေ...
Posted By Yan 13 Comments